Android အတွက်ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများ Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | 27/06/2021 06:00 | Android application များ, Android ဂိမ်းများ
ယနေ့ကလေးငယ်များအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းတွင်အထိရောက်ဆုံးနည်းတစ်ခုမှာ Android ဖုန်းများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းနှင့်ရရှိနိုင်သည့်အက်ပ်များနှင့်ဂိမ်းများမှတစ်ဆင့်အိမ်၏အငယ်ဆုံးသည်သူတို့၏အားလပ်ချိန်များကိုအသုံးချနိုင်သည်။ အတိအကျဤအကြောင်းကြောင့်သင်တို့ကိုသင်ရှာတွေ့မည့်နေရာအသစ်တစ်ခုကိုသင်တင်ပြပါမည် ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်ဂိမ်းများ။
ကလေးငယ်များအတွက်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ရရှိနိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။ အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့၏အကောင်းဆုံးသောအရာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်ထောက်ခံချက်များနှင့်အကောင်းမြင်မှတ်ချက်များရှိသည်။
အောက်တွင်သင့်အား Android ဖုန်းများအတွက်ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများကိုဆောင်ယူပေးပါသည်။ မှတ်သားထားသင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းလုပ်သကဲ့သို့ ဒီစုဆောင်းရေးပို့စ်တွင်သင်တွေ့ရမည့်သူအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအားလုံးကိုရရန်အတွက်မည်သည့်ငွေပမာဏကိုမဆိုသင်ဖြတ်တောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအတွင်းပိုင်း micro-ငွေပေးချေမှုစနစ်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အတွင်းရှိအကြောင်းအရာများအပြင်ပရီမီယံနှင့်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကိုပါခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အလားတူစွာမည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုမပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ကဲဟုတ်ပြီ၊ ရပြီ။
1 ကလေးများစာမျက်နှာများကို coloring! ကလေးကစားနည်းများ!
2 သေတ္တာထဲမှာစာ! အက္ခရာသင်ယူခြင်းဂိမ်းများ!
3 ကလေးများအတွက် ABC ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ! စာဖတ်တတ်အောင်သင်ယူပါ။
4 EWA ကလေးများ - ကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်
6 ကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာ - သင်ယူလေ့လာပါ
7 Montessori မူကြို
ကလေးများစာမျက်နှာများကို coloring! ကလေးကစားနည်းများ!
ကလေးငယ်များအများဆုံးချစ်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာအရောင်ခြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးအစားဂိမ်းဟာဒီစုစည်းရေးနေရာမှာပျောက်ကွယ်မသွားနိူင်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကသူတို့ကိုအများဆုံးဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ တီထွင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးရှိသည်။
ကလေးသည်မည်မျှသေးငယ်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းသည် ၃ နှစ်နှင့်အထက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၌သူ့ကိုသင်ရုံသင်ကြားပေးပြီးကလေးသည်၎င်းကိုသူကိုယ်တိုင်သုံးလိမ့်မည်။ မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကိစ္စရပ်များတွင်သူသည်ရစ်သမ်ကိုဖမ်းစားပြီးရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲအရောင်စတင်လိမ့်မည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အနုပညာအတွက်အရသာရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောဇာတ်ကောင်ပေါင်း ၁၀၀ အပြင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောပုံဆွဲခြင်းနှင့်မျဉ်းကြောင်းဆွဲခြင်းနှင့်လက်ချောင်းပန်းချီကားများပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ကြားမှုဂိမ်းမြောက်မြားစွာ၊ ပျော်စရာကာတွန်းနှင့်အသံ ၃၀၀ ကျော်၊ အရောင်စာအုပ်နှင့်ကလေးများအတွက်ပန်းချီကားများ၊ ကလေးငယ်များအသက် ၃ နှစ်နှင့်အထက်ဂိမ်းများ၊ မော်တာကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးရန်၊ မိန်းကလေးများအတွက်ကြိုတင်အရေးအသားစွမ်းရည်များ၊ ကလေးများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အခမဲ့သောပန်းချီကားဂိမ်းများတွင်မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်
ရေးသားသူ: Bini Bambini
သေတ္တာထဲမှာစာ! ကလေးငယ်များအတွက်အက္ခရာများသင်ယူရန်နည်းလမ်းများစွာနှင့်ဂိမ်းများရှိသောအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်၏အငယ်ဆုံးသူများအတွက်အလွန်လက်တွေ့ကျသောသင်ကြားမှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်2 နှစ်မှ5နှစ်အရွယ်ကလေးများအားစာဖတ်ခြင်းနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ကူညီရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အသက်ကြီးသောကလေးများအတွက်လည်းထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ယင်း၏အာရုံသည်အငယ်ဆုံးကိုသာဖြစ်သည်။
ဒီအက်ပ်မှာရှိတယ် ရိုးရှင်းသောစကားလုံးများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်အတွက်ကလေးများသည်အက္ခရာများကိုလိုက်ရှာပြီးလိုက်လံဖမ်းယူရမည်။ စာများသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအတော်လေးချစ်စရာကောင်းသည်၊ ထို့ကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့်အာရုံမပျံ့လွင့်စေရန်ကလေးငယ်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။
အက္ခရာများဖြင့်အက္ခရာများဖြင့်အက္ခရာပါသောအက္ခရာများကိုကလေးများလည်းလေ့လာနိုင်သည်၊ ၎င်းတွင်ရှိပြီးသားအရာအားလုံးကိုအသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးအသုံးပြုရန်သင်ယူနိုင်သည်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများဖြင့်ကလေးများသည်စကားလုံးများ၏အသံများ၊ သူတို့၏အဓိပ္ပါယ်များနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်လည်းကျရောက်နိုင်သည်။
စကားလုံးများကိုတည်ဆောက်ရန်သူတင်ပြသောပဟေlesိအားလုံးသည်သင်ကြားရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုဖြေရှင်းသည့်အခါစကားလုံးများ၏ဂရပ်ဖစ်ဖော်ပြချက်ပေးသောပုံရိပ်ထုတ်ပေးသည်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းရှိဂိမ်းများ၏ကာတွန်းအက္ခရာများတင်ဆက်ထားသောပျော်ရွှင်စရာဒိုင်းနမစ်ကြောင့်ကလေးများသင်ယူနိုင်သောစကားလုံး ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ကလေးများအတွက် ABC ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ! စာဖတ်တတ်အောင်သင်ယူပါ။
ကလေးများအတွက် ABC ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ! အသက် ၄ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိကလေးငယ်များအတွက်နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သော app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ကြားမှုမသန်စွမ်းသောကလေးများနှင့်မူလတန်းကျောင်းရှိသူများအတွက်သင်ကြားရေးဂိမ်းများ၊ အက္ခရာများ၊ စကားလုံးများ၊ ဝေါဟာရများနှင့်အက္ခရာများနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ကြားနည်းဆိုင်ရာဂိမ်းများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များမှတစ်ဆင့်တင်ဆက်သည့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပေးထားသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။
ကလေးများအတွက် ABC ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများကိုအသုံးပြုသောကလေးများ! သူတို့သည်စာလုံးများနှင့်စာလုံးများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွဲ့စည်းနိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ အသံထွက်တတ်လာလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အက္ခရာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့သုံးပါ။ အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့သည်ရိုးရှင်းသောစာလုံးများကိုရေးတတ်ရန်သင်ယူပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပိုမိုကြာရှည်သည့်စာလုံးများကိုဆက်လက်လေ့လာကြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကလေးငယ်၏သင်ယူမှုအခက်အခဲများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုချို့ယွင်းမှုများရှိပါက ပို၍ ကောင်းမွန်သောသင်ကြားရေးအထောက်အကူဖြစ်သည်။ သံသယဖြစ်စရာမလို၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းရှိရုပ်ပုံများ၊ အရောင်များနှင့်ဂိမ်းများအားလုံးသည်အလွန်စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသော။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်ကလေးများအားစကားလုံးများကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးသည်၊ ရေးသားရုံသာမကအသံထွက်စေရုံသာဖြစ်သည်။ ကလေးများအား၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်များကိုလက်တွေ့ကျသောနည်းဖြင့်သင်ယူစေသည်။
ကလေးသူငယ်များအတွက်ဤလျှောက်လွှာ၏ထိရောက်မှုကို၎င်း၏ကြယ် ၄.၃ ကျော်၊ ဒေါင်းလုပ် ၅ သန်းကျော်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်မှတ်ချက်များ ၂၅၀၀၀ ကျော်တွင်ပြသထားသည်။ အချည်းနှီးမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်၎င်း၏အမျိုးအစားတွင်အသုံးအများဆုံးနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
EWA ကလေးများ - ကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်
သင်သည် EWA အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခင်ကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ကြားဖူးခဲ့ဖူးသည်၊ ၎င်းသည် Play Store တွင်ဒေါင်းလုပ် (၁၀) သန်းကျော်နှင့် (၄.၆) ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့်မူလအက်ပလီကေးရှင်းကြောင့်လူကြိုက်များခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ EWA ကလေးများ - အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက်ကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်သည်ကလေးငယ်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးသင်ကြားရေးနှင့်သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များဖြင့်အငယ်ဆုံးများအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များသည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုတစ်နေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်သာအသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ဗဟုသုတများစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကြာရှည်ခံသောရလဒ်များအတွက်ပိုမိုကြာရှည်သည်။ အဲဒီမှာရှိပါတယ် ကလေးများအားအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရာတွင်ကူညီသည့်ဂိမ်းများ၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ဂိမ်းအမျိုးမျိုး။ ဒါဟာအလွန် didactic သည်နှင့်ကလေးငယ်များအတွက်ဘာသာစကား၏စုပ်ယူဘို့မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
၎င်းတွင်သင်ခန်းစာများစွာ၊ အခြေခံကျသောသင်ခန်းစာများနှင့်သင်ကြားမှုဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဘာသာပြန်ခြင်းများသာမကရိုးရိုးပဟေlesိများနှင့်ဂိမ်းများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူပြုသည့်ဘာသာပြန်များနှင့်ဓာတ်ပုံများပါသောရာနှင့်ချီသောစာအုပ်များလည်းပါရှိသည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့ကလေးများသည်မည်သို့အသံထွက်ရကြောင်းကိုသိနိုင်ရန်အသံများမှတဆင့်စကားများစွာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ရေးသားသူ: လီသီယမ်ဓာတ်ခွဲခန်း Pte Ltd
မြို့တော်ပြိုင်ပွဲသည်ကလေးငယ်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးမြို့ကြီးများကိုလေ့လာပါ။ ဤ app ဖြင့်ကလေးငယ်များသည်ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံများစွာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်။
မေးခွန်းများနှင့်ရွေးချယ်စရာဂိမ်းများမှတစ်ဆင့်ကလေးများသည်မည်သည့်မြို့တော်သည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီအတွက်မှန်ကန်သည်ကိုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီဂိမ်းမှာကာတွန်း၊ ကလေးငယ်များအတွက်ကာတွန်းရုပ်ပုံများနှင့်ဖျော်ဖြေရေးတေးသံပါရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်နိုင်ငံများ၏အထိမ်းအမှတ်များ၊ တစ်ခုချင်းစီ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးများ၊ အလံများ၊ ဒေသများ၊ တိုက်ကြီးများနှင့်အခြားများစွာအကြောင်းကိုလည်းသင်ကြားပေးသည်။ ၎င်းတွင်အခမဲ့ဂိမ်းစနစ် (၁၀) ခုနှင့်အလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်သည့်အခက်အခဲအဆင့် (၅) ခုပါဝင်သည်။
ကလေးများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာ - သင်ယူလေ့လာပါ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းသည်အိမ်သားများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းဆုံးအရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသဖြင့်၊ သင့်အား၎င်းအတွက်သင်အတွက်နောက်ထပ်လျှောက်လွှာတစ်ခုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး၊ နံပါတ်များ၊ အရောင်များ၊ ပုံစံများ၊ တစ်ပတ်၏နှစ်များ၊ နှစ်များ၏လများ၊ သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များ၊ အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ , ည့်ခန်း၊ အားကစား။
ဒီအပလီကေးရှင်းသည်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကိုအရေးအသားမှတဆင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဂိမ်းများဖြင့်ပါရှိသည်။ ဒါဟာအစပါရှိပါတယ် သူတို့ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများတွင်ကူညီပေးနေသောကလေးငယ်များအတွက်လက်တွေ့ကျကျပဟေlesိများနှင့်သင်ကြားနည်းသင်ကြားရေးနည်းလမ်းများ အခြားဘာသာစကားများကိုအရသာရှိစေရန်လည်းပါ ၀ င်သည်။ ဒီနည်းနဲ့ကလေးတွေကအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူပါလိမ့်မယ်။
Android Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုဤစုစည်းထားသည့် post ကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၌မျှတသောပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာ Montessori Preschool ရှိသည်၊ လှုပ်ရှားမှုများစွာနှင့်ကလေးများနှင့်နားလည်မှုနှင့်သင်ယူမှုရှိသူများအတွက်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများပါ ၀ င်သည်။ နေ့စဉ်အသက်တာ၌ရောကျောင်း၌ပါပြနာဖြစ်သည်။
အရောင်၊ ပုံစံ၊ အသံထွက်၊ ရိုးရှင်းပြီးရှုပ်ထွေးသောစာလုံးများ၊ နံပါတ်များ၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ နှုတ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည်သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းတွင်အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသက် ၃ နှစ်မှ ၇ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်အထူးပြုသည်, ဒါပေမယ့်ငယ်ငယ်ကတည်းကအခြေခံကိုမသင်ယူခဲ့တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုလေးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ၎င်းသည် virtual စာသင်ခန်းတစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်ကလေးများကိုသင်ယူခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆုချသည့်စနစ်ကိုပေးသည်။
ရေးသားသူ: EDOKI အကယ်ဒမီ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android အတွက်ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများ
Kospet Optimus 2: လွှတ်တင်ခြင်း၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရရှိနိုင်မှု